Nhau - Kukwira nekukurumidza kwePVC pasi kana kuchachinja maitiro aripo eindasitiri yepasi?
Iko kukurumidza kumuka kwePVC yekushongedza kana kuchachinja iyo iripo pateni yemafurati indasitiri?
PVC inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri mazhinji ezasi, anomiririrwa nemapombi uye maprofiles. Sekureva kwenhamba yeruzivo rweLongzhong, mune yekudzika kwekushandisa kwePV muna 2018, huwandu hwepombi nemaprofile aive 27% uye 24% zvichiteerana. Mumakore achangopfuura, asi kune indasitiri mune mazhinji maPV ekudzika maindasitiri, inova indasitiri yePVC. Chiyero chehuwandu hwePV kudiwa chakawedzerawo kubva pa3% muna 2014 kusvika 7% muna 2020.
Parizvino, kunwiwa kwegore negore kwePVC pasi kunopfuura mamirioni mazana matatu emamirimita, iyo inotyaira kukurumidza kukura kweyepamba PVC yekudyara indasitiri, uye inoumba zvigadziko zvina zvemaindasitiri muBeijing, Zhangjiagang, Shanghai neGuangzhou. Pakati pavo, Beijing inonyanya kupinza zvigadzirwa zvecoil, Zhangjiagang ndiyo hombe PVC uye WPC sheet indasitiri nzvimbo muChina, nepo Beijing neShanghai dzakatarisana nevekunze uye vekunze-kirasi mabhizimusi emabhizimusi epamba kumba nekune dzimwe nyika, uye huwandu hwese hweaya mana matunhu anoverengera anopfuura makumi mapfumbamwe muzana muzana ezvigadzirwa zvemumba.
Mugove wemusika wepamba wakaderera, uye zvinotarisirwa kutsiva laminate uye composite pasi
Parizvino, nekuda kwesimba rekushomeka kweruzhinji, PVC pasi inowanzoshandiswa muzvikoro, zvipatara, mabus stop uye dzimwe nzvimbo dzeveruzhinji, uye kushandiswa kwekugara kushoma.
Inofananidzwa nenyika dzakabudirira, musika chikero chePVC yekushongedza muChina ichiri pazasi nhanho. Muna 2017, kudiwa kweChina kwePVF flooring kwakaenzana ne4.06% chete, uye kuchine nzvimbo yakawanda yekukura. Pvc yeChina yePVC inowanzoshandiswa kushongedza veruzhinji, nepo 50% muUnited States inoshandiswa kushongedza pamba. Nekukura kwemari yenyika, iko kuiswa kwePVF flooring kuchazonyanya mune ramangwana. Zvinotarisirwa kuti PVC pasi inotsiva laminate flooring uye yakasanganiswa flooring zvakanyanya mumakore anotevera 5-10 makore, nokudaro ichiwedzera zvikuru chikamu chemusika kusvika kungangoita 8% - 9%.
Kuburitswa kwePVF flooring kunokura nekukurumidza
Kubva pamamiriyoni 1.39 ematani muna 2014 kusvika pamatani emamiriyoni 3.54 muna 2018, huwandu hwekutengesa pasi pePVC muChina hwakawedzera ka1.5 mumakore mashanu apfuura, paine huwandu hwepakati hwekukura pagore hwe27%. Kukura kwegore negore kwekutengesa kunze kwakawedzera kubva paUS $ 1.972 bhiriyoni kuenda kuUS $ 1.957 bhiriyoni muna 2014. Mune ramangwana, nekufambira mberi uye budiriro muhunyanzvi uye tekinoroji yekugadzira emabhizimusi eChinese PVC, kudanwa kwePVC pasi pekunze kuchazokurudzirwa.
Uriri, PVC Carpet, Pet Chipanji Siporiri, PVC Sponge Floor, Pet Anonzwa Kutsigira Flooring, Pasi Carpet Roll,